Posted on: July 24, 2016 | views: 30174
मैले पहिला देखिनै के भनेको थिएं भने योद्धा हुँ । नेपोलियन बोनापार्ट नै ३३ बर्षमा गए । मलाई त्यस्तो कुनै लोभ छैन जीवनको । त्यति डर राखेर गरेको भए मैले यतिसम्म रिक्स पनि लिन सक्ने थिइन होला । गर्दै जाने हो भोलि नै जान पनि सकिन्छ । जहिले जान नि सकिन्छ । सकेसम्म आफु बसेको दिनसम्म युजफुल मान्छे बन्न सकुं भन्ने चाहना हो । मलाई यति बर्ष बाँच्छु नातिको अनुहार हेर्छु छोराको ब्रतबन्ध हेर्छु भन्ने छैन । त्यो चाहिं मलाई कुनैपनि मनमा छैन । संभवत हामी सबैले त्यहि नै राख्नुपर्छ । हामी सबैको कुनै ग्यारेन्टीनै छैन नि हैन । सकेसम्म म युजफुल हुनेबेलासम्म बाचुँ ।
त्यो अन्तिम पलमा के भनेर चिनिन पाउँ वा चिनिन्छु भन्ने छ ?
भवन भट्टले धेरै सेक्टरमा इकोनोमि वाईज अथवा कन्ट्रिव्युसन वाईज, सोसियल वाईज, ग्लोबल वाइज राम्रै योगदान गर्यो भनेर दुई थोपा आँसु झारेको हेर्न चाहन्छु ।
त्यो अन्तिम पल कहाँ हुन मन छ ?
म जतिखेरै भ्रमणमा हुन्छु कामले । यो साचिराख्यो भने त काम गर्न अघि बढ्नै सकिंदैन नि । त्यो समयले बताउँछ । सिंगापुरमा राम्रो हस्पिटल बनेको रहेछ भने त्यहाँ जानुपर्ला त्यहीँ उपचारको क्रममा जाला । त्यतिखेर म हठ लिएर मलाई नेपाल मै लगिदेउ यो गर भन्दिन, तपाईहरुलाई जहाँ सजिलो लाग्छ, जे गर्दा उचित लाग्छ त्यहि गर्नुस् ।
कार्यकक्षको भित्तामा महाभारत युद्धको फोटो देखें, यसको अर्थ के हो ?
भनेको भवन भट्ट युद्धमा छ भन्ने हो ?
शुभकामना यो युद्ध जित्नुहोस् ।
अन्र्तवार्ताका थप अंश विस्तृतमा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्